Breathe: Into the Shadows (2020) – Gold Channel Movies
1Season 1 Jul. 10, 2020
Papa's Princess Jul. 10, 2020
Filthy Jul. 10, 2020
Wings and Chains Jul. 10, 2020
Mind Games Jul. 10, 2020
Reflection Jul. 10, 2020
Turning Point Jul. 10, 2020
Relay Race Jul. 10, 2020
Bad Uncle Jul. 10, 2020
Lights Out Jul. 10, 2020
1996 Jul. 10, 2020
Chef's Special Jul. 10, 2020
C-16 Jul. 10, 2020
Amazon Prime က​နေ July လ ၁၀ ရက်​​နေ့က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Breathe: Into the Shadows ဆိုတဲ့ Tv Series ​လေးအ​ကြောင်း ​ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီ Series က​တော့ အိန္ဒိယ Crime Drama Thriller အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယကား​တွေလို ​ပြောလိုက်တာနဲ့ အများစု​ပြေးမြင်တာက အက မှုခင်းနဲ့ မဆုံးနိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလို့ပဲ​ပြေးမြင်ကြမှာပါ။ ​ဒီ Series က​တော့ မှုခင်းကားဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားဖို့ အတော်ကောင်းပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့​ Tv Series ဆိုပြီး ရုပ်သံလိုင်း​တွေမှာ လွှင့်တဲ့ ၃နှစ် ၃မိုး​လောက်ကြာတဲ့ဟာမျိုး​တော့မဟုတ်ဘူး။ ဒီ Series မှာ​တော့ အပိုင်းအ​နေနဲ့ ၁၂ ပိုင်းပါဝင်ပြီး​တော့ ကြာမြင့်ချိန်ကလဲ တစ်ပိုင်းကို ၄၅ မိနစ်ပဲ ရှိပါတယ်။ အကြာကြီး​တော့ ကြည့်စရာမလို​တော့ဘူး​ပေါ့။
သရုပ်​ဆောင်​တွေအ​နေနဲ့က​တော့ Dhoom 123 နဲ့ Happy New Year တို့မှာ လူသိများတဲ့ Abhishek Bachchan၊ အိန္ဒိယရုပ်ရှင်​တော်​တော်များများမှာ သရုပ်​ဆောင်ထားတဲ့ Nithya Menen တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ​​နောက်ပြီး​တော့ ၂၀၁၉ က ထွက်ခဲ့တဲ့ Barot House ၂၀၁၆ က Sultan နဲ့ ၂၀၁၈ ​​လောက်က Gold တို့လို နာမည်ကြီးကား​တွေမှာ သရုပ်​​ဆောင်တဲ့ Amit Sadh လဲပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းက​တော့ 2018 ကထွက်ရှိထားတဲ့ Breathe ဆိုတဲ့ Series နဲ့ တစ်ချိန်ထဲမှာ ဇာတ်အိမ်တည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ​ပြောရရင်​တော့ Tv series နှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ထားတဲ့သ​ဘောပါ။ Breathe မှာ​တော့ Amit Sadh ကဦး​ဆောင်ထားပြီး​တော့ Breathe: Into the Shadows မှာ​တော့ Abhishek Bachchan ကဦး​​ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
​ဒေါက်တာ အဗီနဲ့ အဘ်ဟာတို့မှာ စီရာဆိုတဲ့ ၆ နှစ်အရွယ်သမီး​လေးတစ်​ယောက်ရှိပါတယ်။ အရမ်းလဲ​ပျော်ဖို့​ကောင်းတဲ့မိသားစု​ပေါ့။ တစ်​နေ့ကျ​တော့ စီရာ​လေးကို သူ့အ​ဖေ အဗီက စီရာသူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ဆာရာရဲ့ ​မွေး​နေ့ပွဲကို လိုက်ပို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ​နေ့မှာပဲ စီရာ​လေးက​ပျောက်ချင်းမလှ ​ပျောက်သွားပြီး​တော့ လအ​တော်ကြာ ​ပျောက်ဆုံး​နေပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်​နေကျ ​ဒေါက်တာ အဗီရဲ့ သမီးဆို​တော့ ရဲ​တွေကလဲ အပူတပြင်းကို ကြိုးစားရှာကြပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ပဲ အချိန်အ​တော်ကြာ​ပျောက်ဆုံး​နေခဲ့ပါတယ်။
တစ်​နေ့ကျ​တော့ အဗီတို့အိမ်ကို ပစ္စည်း​ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘာပစ္စည်းလဲဆို​တော့ စီရာ​လေးအသက်ရှင်​နေတဲ့ အ​ထောက်အထား​တွေပါ။ စီရာ​လေးကို ပြန်လိုချင်ရင် လူတစ်​ယောက်ကို သတ်​ပေးရမယ်လို့လဲ​ပြောထားပါ​သေးတယ်။ စိတ်​ရောဂါဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ အဗီတစ်​ယောက် ​ခေါင်းကိုက်ရပါ​တော့တယ်။ သမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲ ပြန်​ပေးသမား​ပြောသလို လုပ်ရမလား။ အမှု​တွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရှိတဲ့ ဆရာဝန်ပီပီ ရဲ​တွေနဲ့ပဲ ပူး​ပေါင်းရမလားဆိုတာကို ​ဝေခွဲမရ​ဖြစ်​နေပါ​တော့တယ်။
အိန္ဒိယကားပီပီ မှုခင်းကား​တွေဆိုရင် ဇာတ်အိမ်လဲ​​ကောင်းပြီး​တော့ စိတ်ဝင်စားဖို့​လဲကောင်းပါတယ်။ အိန္ဒိယကာယငတ်​နေကြတဲ့ GC ပရိသတ်​တွေအတွက် iMDB မှာ 7.8 ​တောင်ရထားတဲ့ အိန္ဒိယစီးရီးအသစ်​လေးကို တင်ဆက်​ပေးလိုက်ရပါတယ်။
Size – 600MB / 160MB
Original title Breathe: Into the Shadows
Ko aungJanuary 2, 2021Reply
Breath 2018 လေးပြန်တင်ပေးပါလား admin link ပျက်နေလို့pls
Hein MinDecember 16, 2020Reply
sat m tin tot buu lrr bya
Min Thit HtunNovember 28, 2020Reply
ကိုဂွေးကြီးNovember 17, 2020Reply
naytunlinNovember 13, 2020Reply
Thar Si ThuNovember 6, 2020Reply
The Last Kingdom (2015 –